Maitiro ekushongedza zita neruoko muzvirongwa zvako | Mhizha On
Maitiro ekushongedza zita neruoko kuti uite ako mapurojekiti
Marian monleon | | Crafts, Mhizha nemucheka
Mhoro munhu wese !!!. Handizive kana zvichizoitika kwauri seni kuti ini ndoda kugadzira zvinhu zvemachira nekuisa zita, kungava muhombodo yekudya, muhombodo yekugezesa, mubhibhi rechikoro, uye saka ndinogona kuenderera ndichinyora zvinhu zvisingaperi. ..
Nhasi ndiri kuzokuratidza kuti ndeipi hurongwa hwandinoshandisa shongedza zita neruoko izvo zvandinovimba zvinobatsira kwazvo gadzirisa mapurojekiti ako ekusona.
Zvishandiso zvatinozoda zviri nyore uye zvakakosha pakusona, uchave nazvo kumba:
Kupindirana (Yeye inonamira kune rimwe divi).
Shinda yekushongedza (Ini ndashandisa 5gr tambo yeEgipita).
A sindano (Inofanirwa kuve yakakora kuti ikwanise kupfuudza tambo).
Penzura kana mucherechedzo weavo akadzimwa nekuisa kupisa.
Kugadzira zita racho ndakazviita mahara, asi unogona kusarudza kuriprinta uye wobva waritsvaga pamucheka pachaenda zita rako rakarukwa.
Tinocheka chidimbu che machira uye kupindirana iyo yatinozoshandisa.
Isu tinoisa kupisa kuitira kuti zvidimbu zviviri zvinamatire pamwechete.
Tinotara zita racho pamucheka.
(Unogona zvakare kudhirowa zita pamucheka kutanga, kuitira kuti uteme zvaunoda, kana kuzviita zvakananga pachinhu kuti usarudze).
Ino inguva yekushongedza, ini ndichakutsanangurira iwe nematanho mana aya:
Takapfuudza tsono kubva kumashure kwejira (4).
La tinotangazve kuburikidza neiyo saiti uye tinopa musono wakabata tambo sezvazviri mumufananidzo (5).
Tinodzokorora nhanho imwechete yapfuura, nekudaro ichisara ketani chimiro.
Tiri kutevera mucherechedzo wetsamba uye patinosvika kumagumo tinobata poindi yekupedzisira nekupfuudza tsono kune rimwe divi rejira.
Tinogona chete sunga parutivi rwakashata rwejira, nekuti icho chikamu hachionekwe. Uye nekudaro isu tine tsamba dzakarukwa uye chinhu chedu chakasarudzika.
Ndinovimba wakafarira basa iri Uye kuti iwe uzviise mukuita, ndine chokwadi chekuti mune mamwe mapurojekiti ako achabatsira kwazvo. Iwe unotoziva kuti iwe unogona kuigovana, ipa iyo yakafanana mumifananidzo iri pamusoro, taura uye bvunza zvaunoda, nekuti tinofara kupindura mibvunzo yako. Tokuona pane inotevera DIY.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mhizha On » Crafts uye zvinhu » Mhizha nemucheka » Maitiro ekushongedza zita neruoko kuti uite ako mapurojekiti
Kugadzirisa mupendero wejean